Kindle အမျိုးအစားများ၊ Kindle သည်မည်သည့်ပုံစံကိုဖတ်သနည်း။ ရှာတွေ့သည်! | eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, eBooks, စာဖတ်သူများ
e-book ဆိုသည်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်တစ်ခု၊ စာအုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်စာလုံးအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်မှဆင်းသက်လာသော ebook ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ အစပိုင်းမှာအီလက်ထရောနစ်စာအုပ်တွေဖတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက ebook ဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ဒါ့အပြင် ebook format တွေကိုဝိုင်းရံထားသည့်အတိုကောက်ဝဘ်ဆိုက်ကိုထပ်ဖြည့်ပါကရှုပ်ထွေးနေသည်။ အခုအချိန်မှာလူအနည်းငယ်ဟာဘယ်လိုအတိအကျသိကြသလဲKindle နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အမျိုးအစားတွေရှိတယ်။ များစွာသောသူတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသော e- စာအုပ်စာဖတ်သူကို အကောင်းဆုံး eReader.
e-book reader အားလုံးသည်တူညီသောပုံစံများကိုဖတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး စီသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအပြင်အခမဲ့မဟုတ်သောယေဘုယျပုံစံများပါ ၀ င်သည်။ ဤဒုတိယအမျိုးအစားအမျိုးအစားများတွင် Epub သည်ထင်ရှားသော ebook format၊ txt, pdf သို့မဟုတ် doc document ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးပုံစံအမျိုးအစားများနှင့်ကြီးသောထုတ်လုပ်သူများပါ ၀ င်သည့်စီးပွားဖြစ်ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့ပြုပြင်ထားသော Epub ပုံစံမှဆင်းသက်လာသည်။ ဤအရာအားလုံး၏ဆိုးကျိုးမှာစာအုပ်ဆိုင်တွင်စာအုပ်တစ်ခုကိုဝယ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌အခမဲ့ပုံစံမရှိပါက၎င်းသည်အခြားစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှစာဖတ်သူတွင်မဖတ်နိုင်တော့ပါ။
ဤအားနည်းချက်များသည်အများအားဖြင့်အမေဇုန်၏စာဖတ်သူများ၊ Kindleသူတို့က ebooks အရေအတွက်ကိုသာဖတ်တယ်၊ ပုံစံလေးမျိုးမှာအမေဇုံပိုင်ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည် Kindle Format 7၊ Kindle Format 8၊ mobi format နှင့် prc format တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤပုံစံများသည် mobi သို့မဟုတ် Kindle Format7ကဲ့သို့သောနောက်ဆုံးသတင်းများသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ဤပုံစံများကိုဖန်တီးရန်အခြေခံအဖြစ် Epub format ကိုအခြေခံသည်။ Kindle Format 8 သည်နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤပုံစံများကိုပိုမိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။
1 Kindle Format7(သို့) AZW ဟုလည်းလူသိများသည်
2 Kindle အမျိုးအစား 8 သို့မဟုတ် AZW3
3 Kindle Mobi ပုံစံ
5 Kindle Fire ဖတ်နိုင်သော ebook အမျိုးအစားများ
Kindle Format7(သို့) AZW ဟုလည်းလူသိများသည်
ဤ Kindle အမျိုးအစားသည် mobi ပုံစံ၏တိုးတက်သောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အမ်မဇုန်သည် Mobipocket ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏မူပိုင်ခွင့်နှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သိပ်မများလှသော်လည်း၎င်းတို့တွင် Amazon ကပိုမိုတန်ဖိုးထားဆုံးဖြစ်သော ebook formats အတွက်မူပိုင်ခွင့်များ၊ အထူးသဖြင့် mobi format ရှိသည်။ The mobi format သည် OpenBook စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ကြိုးစားသည်xml ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသောပုံစံ။ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်အမေဇုံကပုံစံကိုယူပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားလုံးကိုလေးစားပြီးကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ဖြစ်သောကိုယ်ပိုင် DRM ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ebook ကိုစီးပွားဖြစ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုအားအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Kindle Format ကို ၇ နှစ်၊
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ Amazon eReaders များပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးသူတို့နှင့်အတူဆော့ဝဲလ်နှင့်သူတို့ကစားနိုင်သည့်ပုံစံများပြောင်းလဲလာသည်။ Kindle Format 8 ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။
Kindle အမျိုးအစား 8 သို့မဟုတ် AZW3
၎င်းသည် Kindle Format7၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် mobi format နှင့် drm ပါသည့်အလွှာမရှိတော့ဘဲအခြားအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Kindle Format 8 or AZW3 သည် EPUB3 စံနှုန်းအတိုင်းလိုက်သော ebook တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းတို့တွင် drm ပါ ၀ င်ပြီး AZW သို့မဟုတ် Kindle Format7format ရှိဖိုင်တွဲတစ်ခုနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်၎င်းသည် format အဟောင်းကိုဖတ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ mobi format နှင့် Kindle Format7တို့ကိုဖန်တီးသောအခါ epub ပုံစံ၏စံသတ်မှတ်ချက်သည်အစပြုပြီးရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အမေဇုန်သည် AZW3 မရောက်မချင်းဤပုံစံကိုမရဲရဲခဲ့ပါ။ AZW3 သည် HTML5 ၏စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုပါ။ အချို့သော tags အသစ်များက၎င်းတို့ကိုမပံ့ပိုးနိုင်သကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းသွားသောအချို့သည်လည်း၎င်းတို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေကြသည်။ ထို့အပြင်၊ CSS3 စံကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာခြင်းမရှိသေးပါ၊ ပုံသေနောက်ခံအလွှာကဲ့သို့သောအချို့သောအရာများသည် CSS3 နှင့်မကိုက်ညီပါ။
Kindle Mobi ပုံစံ
ဤ Kindle အမျိုးအစားများနှင့်အတူ Kindle eReaders ကလည်း mobi format ကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည် Amazon ၏ရှေးအကျဆုံးအပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်းဤပုံစံသည်ဆက်လက်တည်ရှိပြီး Amazon က၎င်းကို eReaders တွင်ဆက်လက်ထောက်ပံ့သည်။ အမေဇုံမှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ DRM-free ဖြစ်သည်။ DRM-free Mobi သည် Mobipocket တီထွင်မှုသည်သူတို့ဖန်တီးခဲ့သောဒုတိယ ebook အမျိုးအစားကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်အကာအကွယ်အလွှာများစွာရှိသည်။
Amazon သည်ကုမ္ပဏီကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့် ၄ င်း၏စာဖတ်သူများထံသို့ထုတ်လွှင့်သောပထမဆုံးပုံစံများမှာ PRC ပုံစံဖြစ်သည်။ prc သည်ရိုးရှင်းသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး mobi format နှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း၎င်း၏အလွှာတွင်ကာကွယ်မှုမရှိသောကြောင့် mobi format ကိုဖတ်ရှုသောစာဖတ်သူများအားလုံးသည် prc format ကိုပုံမှန်ဖတ်နိုင်သည်။ ဤပုံစံဖြင့် ebooks ကိုတွေ့ရန်အလွန်ရှားပါးသည်၊ အနည်းဆုံးလက်ရှိစာအုပ်များဖြစ်သည်။ သို့သော် Kindle catalog အားစနစ်တကျပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤပုံစံအဟောင်းကိုစာဖတ်သူများတွင်သိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်၊ အနည်းဆုံး ebooks ဟောင်းများကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ပုံစံများအပြင်, Kindle သည် Amazon မဟုတ်သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ် GPL အောက်တွင်လိုင်စင်ရသည့်အခြားပုံစံများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ ဤပုံစံများထဲမှ PDF သည်ထူးခြားသည်၊ ၎င်းသည် ebook ပုံစံမဟုတ်သော်လည်းစာဖတ်ခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pdf သည် Adobe နှင့်၎င်း၏အတိုကောက် Portable Document Format ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သောသယ်ဆောင်နိုင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ Adobe သည်ဤပုံစံကိုအဓိကတီထွင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်၎င်းကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် pdf format နှင့်၎င်းကိုသယ်ဆောင်နိုင်မှုကို Amazon eReaders တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းအချို့သောလူများအတွက်စာဖတ်ခြင်းသည်အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။ သို့သော်လက်ရှိတွင် ၉.၇ ထက်နည်းသောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား။ အစပိုင်းတွင်၎င်းကိုကျော်ကြားသော Kindle DX ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်အတူဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤ eReader သည် pdf စာရွက်စာတမ်းကို Epub ပုံစံသို့အသွင်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ် pdf ၏အရွယ်အစားသို့ပြောင်းလဲခြင်းစသည့်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများဖြင့်စွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် မျက်နှာပြင်။
လွန်း Kindle ၎င်းသည် txt သို့မဟုတ် Html ကဲ့သို့သောအဟောင်းပုံစံများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုကတော့ txt ဟာကွန်ပျူတာလောကမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဤပုံစံနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည် Windows Notepad မှထုတ်လုပ်သောပုံစံဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ရှိပုံစံသည်စာအုပ်ပုံစံအဖြစ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤပုံစံသည်အခြေခံတည်းဖြတ်ခြင်းရွေးချယ်စရာများသို့မဟုတ်စာသားအပြင်အဆင်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးထုတ် kindle စာဖတ်သူများသည် doc နှင့် docx ပုံစံများ၏စာဖတ်ခြင်းကိုထည့်သွင်းထားသည်ဤအမျိုးအစားများကို Microsoft Word မှထုတ်လုပ်ပြီး txt တွင်ဖန်တီးထားသော ebook များနှင့်တကယ့်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ txt, doc နှင့် docx စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့အားစာဖတ်ရန်တည်းဖြတ်ပြီးကြိုတင်ပုံစံချထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ထားခွင့်ပြုသည် သို့သော်ဤပုံစံနှစ်မျိုးလုံးသည် ebooks များဖြစ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်စာဖတ်သူတွင်မဆိုအားနည်းချက်များရှိသည်။ ထိုအားနည်းချက်များအနက်တစ်ခုမှာဖိုင်အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AZW နှင့် AZW3 ပုံစံများဖြင့် ebook များ၏အရွယ်အစားကိုကြည့်ပါက၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားသောပမာဏမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့် ၂ megabytes ထက်ပိုများသည်။ သို့သော် doc သို့မဟုတ် docx format ရှိ ebook တစ်ခုသည် ၃ ဆမျှပိုမိုများပြားနိုင်သည်၊ Kindle မှစီမံခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း
အီလက်ထရောနစ်မှင် eReaders ဖြစ်သည့် Kindle သည်ပုံရိပ်များကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခြားနားချက်များနှင့် tonality ပြောင်းလဲမှုကိုသင်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ပါက၎င်းတို့သည်အရောင်မ ၀ င်သော်လည်းပုံရိပ်များကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အီလက်ထရောနစ်မှင်ဖန်သားပြင်နည်းပညာနှင့်အလွန်မြင့်မားသော resolution ရှိသည့်နောက်ဆုံးပေါ် Kindle တွင်ဤအရာသည်အလွန်တန်ဖိုးထားခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်ချင်သောအရာသည် Kindle Fire ပေါ်ရှိပုံများဖြစ်ပါက၊ အထက်ပါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံရိပ်များကိုအရောင်ဖြင့်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ပုံသဏ္manyာန်အမျိုးအစားများသည်များပြားပြီးကွဲပြားသော်လည်း Kindle မည်သည့်ပုံစံမဆိုစာဖတ်နိုင်သည်။ ဤအချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောအချက်မှာ Amazon အားဂရုစိုက်ပြီးစာဖတ်သူများသည်လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်ပုံများကိုဖတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့မည့်ပုံသဏ္formာန်များသည် jpg, png, bmp, gif ဖြစ်သည်။
Kindle Fire ဖတ်နိုင်သော ebook အမျိုးအစားများ
အ Kindle Fire အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် Kindle စာဖတ်သူများ၏ဒုတိယလူတန်းစား ဘယ်သူမှထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သူတို့ကိုခေါ်သော်လည်း။ Kindle Fire မိသားစု၏စက်ပစ္စည်း၏သဘောသဘာဝသည်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲသည်စာဖတ်ခြင်းကမ္ဘာအပေါ်အလွန်မူတည်သည်၊ သို့မှသာတည်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များ၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုပင်ပေးရလိမ့်မည်။ စာဖတ်သည့်အခါစာဖတ်သူကိုသာ။ ကြီးမြတ်နှစ်သိမ့်။
Kindle Fire သည်အမေဇုန်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော Android ဗားရှင်းတစ်ခုကို၎င်း၏ရင်သွေးငယ်တွင်သယ်ဆောင်သွားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော operating system ကို FireOS ဟုခေါ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် Kindle Fire သည်တက်ဘလက်နှင့် Android ရှိခြင်းသည်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုထောက်ပံ့နိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းပထမပုံစံမှအမေဇုံက Play Store မှမည်သည့် app ကိုမဆိုတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်၊ အမေဇုံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးလျှင်အမေဇုန်ကိုအသုံးပြုပါ
အစပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle Fire ကို ၀ ယ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ebook အမျိုးအစားများကိုဖတ်နိုင်သော်လည်းအခြားမာလ်တီမီဒီယာအမျိုးအစားများကိုဖတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် ebook နှင့်မသက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ebook များအသုံးပြုသောအခါသိရန်အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီ။
မကြာသေးမီလများအတွင်း Amazon သည် Audible ဝန်ဆောင်မှုကိုဂေဟစနစ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်မဟုတ်သောမှင်ဖန်သားပြင်ရှိသောအသံဖိုင်များကိုအသံဖိုင်များဖွင့်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်၊ အထူးသဖြင့် aax ဖြစ်သော Audible app ၏ပုံစံများဖြစ်သည်။
Audible Format သည် Amazon မှစတင်မိတ်ဆက်သောပုံစံအသစ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် LCD စကရင်သို့မဟုတ်အရောင်မျက်နှာပြင်ပါသောသင့်စက်ပစ္စည်းများသို့ ဤကိရိယာများသည် eReaders ထက် ပို၍ စွမ်းအားကြီးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် ebook များသာမကအခြားဗီဒီယိုများ၊ အသံများနှင့်ပိုမိုပြည့်စုံသော ၀ က်ဘ်ရှာဖွေခြင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခြားအမျိုးအစားများသာမက formats အမြောက်အများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ဗွီဒီယိုအမျိုးအစားများအရ၊ mkv နှင့် mp4 သည် 3gp နှင့် vp8 (webm) တို့ကိုလည်းဖတ်ရှုသော်လည်းထင်ရှားပါသည်။ audio format တွေထဲမှာ aax format အပြင် mp3 file, OGG file၊ mp3 နဲ့ WAV extension နဲ့ညီမျှတဲ့ free audio format နဲ့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်။
ကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Kindle Fire ရဲ့ software ကို apk နဲ့အတူ app တွေထည့်ပြီးဒါမှမဟုတ် tablet ကို hack ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယကိစ္စတွင် Amazon သည်အာမခံချက်အတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် eub format ဖြင့် ebook ဖတ်ရန်အတွက်၎င်းကိုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်ပထမကိစ္စတွင်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ebook ပုံစံအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံစံ Epub အဖြစ်။ Aldiko သို့မဟုတ် FbReader ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle Fire မှအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုဂူဂဲလ်စတိုး၊ အမေဇုံစတိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာတောင်တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တပ်ဆင်ရတာလွယ်ကူတယ်။ ထို app ကိုတွေ့ပြီနှင့်၎င်းကိုတက်ဘလက်တွင်သိမ်းပြီးကျွန်ုပ်တို့မသိသောရင်းမြစ်များမှတပ်ဆင်ရန်ရွေးစရာကိုအမှတ်အသားပြုသည်။
ဤရွေ့ကားအကြမ်းဖျင်းဖြစ်ကြသည် Kindle အမျိုးအစားများ Amazon eReaders ကထောက်ခံတယ်၊ ငါအကြမ်းအားဖြင့်ပြောတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာ Kindle မှာရှိနှင့်ပြီးသား ebooks ကိုဖတ်နိုင်၊ မဖတ်နိုင်ဆိုတာကိုသာသိချင်တဲ့ပျမ်းမျှစာဖတ်သူကိုရှုပ်ထွေးစေမယ့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမလေ့လာမိလို့ပါ။
ဤအချက်အလက်အားလုံးဖြင့်သင်ပိုမိုရှင်းလင်းလာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် Kindle ဖတ်တဲ့ပုံစံကဘာလဲ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်ချက်ပေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » Kindle အမျိုးအစားများ၊ အမေဇုန်စာဖတ်သူတွင်မည်သည့် eBooks များကိုသင်ဖွင့်နိုင်သနည်း။
ငါမီးတောက်နေတယ်၊ ဖတ်ဖို့ငါယုံကြည်တယ်မဟုတ်။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒါဟာထူးဆန်းလိုက်တာ။ ငါနာရီပေါင်းများစွာ NBA ကစားခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အနည်းငယ် surfing နိုင်ပေမယ့်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တောက်ပငါ့ကိုအများကြီးနှောင့်အယှက်။ အဲဒါကငါ့ကိုဘာလို့အနှောင့်အယှက်ပေးတာလဲ၊ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဘာကြောင့်သိပ်မများပေမယ့်အဲဒါနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်စာဖတ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ Paperwhite မှအီလက်ထရောနစ်မှင်များကိုပိုနှစ်သက်သည်။
ငါ Kindle Paperwhite ကိုဝယ်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု 4GB နေရာရောက်နေပြီဆိုတာငါဖတ်လို့ပဲ။ ဒါကြောင့်မင်းက ebooks တွေထပ်ထည့်နိုင်တယ်။ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် Paperwhite ပေါ်က ePubs ကိုဖတ်နိုင်ရင်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုပြောချင်ပါတယ်။
Jorge Carlos ကိုပြန်ပြောပါ
ဗစ်တိုရီယိုက Caliber ပရိုဂရမ်နှင့်ပြောသကဲ့သို့တစ်မိနစ်ထက်မနည်းသောပုံစံတစ်ခုမှတစ်ခုသို့သင်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် Kindle ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၎င်းတို့သည် ePub ကိုမဖတ်ရန်အတားအဆီးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၌ Paperwhite ရှိပြီးကျွန်ုပ် download လုပ်ထားသောစာအုပ်များအားလုံးသည် ePub တွင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ eReader တွင်ဖတ်ရှုရန်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့ကို AZW3 သို့မပြောင်းမီ၎င်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Caliber သည်မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်အမျိုးအစားကိုမဆို ပြောင်းလဲ၍ ပြုပြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် epub ဖတ်သောတက်ဘလက်တစ်ခုနှင့် AZW3 ဖတ်သောအမျိုးအစားရှိသည်၊ ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တစ်ပုံစံတည်းမှအခြားသို့ပြproblemsနာမရှိဘဲသွားသည်။
Ma ။ Josep ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ caliber ကိုလျှော့ချပြီး DRM ကြောင့် format ကို AZW3 သို့မပြောင်းနိူင်ပါ
Ma ။ Josep အားပြန်ကြားပါ
Pedro Jose ဟုသူကပြောသည်
JailBreak ကိုသုံးပြီး CoolReader ကို install လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်လိုချင်သောမည်သည့် format ကိုမဆိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်
Pedro Jose အားပြန်ပြောပါ
Daniela နဲ့ Pedro Jose၊ ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယနေ့ငါ Paperwhite ကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီး၊ ငါ Thrones Game နဲ့အတူရှိနေပြီး Dune Saga သို့သွားပြီး iPad ပေါ်တွင်ဖတ်လေ့ရှိသည်။ ငါ laptop တစ်လုံးကိုစုဆောင်းဖို့နဲ့ဝယ်ဖို့ရောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ငါ့ရင်ခွင်ကနေဖတ်ဖို့ငြီးငွေ့စရာကောင်းလာလိမ့်မယ်။
Pedro Jose၊ စာရွက်ဖြူ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနှင့် JB ကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သလား။ အကြံဥာဏ်လား
ငါ့မှာ paperwhite ၂ နှစ်ရှိပြီ။ ကောင်းတယ်၊ ဆိုးလည်းကောင်းတယ်။ ဖတ်ရှုသူအနေနှင့်၎င်းသည်စာဖတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးပြီးအထွေထွေခံစားချက်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါကသိပ်မကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်နှစ်ရှည်စမ်းသပ်သည့်ဘရောက်ဇာသည်အရည်အသွေးညံ့သည်။ သင် Bing Translator ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဘာသာပြန်ကို ရွေးချယ်၍ မရပါ။ ၎င်းကိုသင်သည်းခံရမည်။ ကက်တလန်၊ ဘတ်စ်စ်စသည့်ကျွန်းဆွယ်ဘာသာစကားများလည်းမပါ ၀ င်ပါ။
ငါ kindle paperwhite နှင့် Samsung Note 8 အကြားသံသယပြီးပြီ။
ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အံ့အားသင့်ရန် upload တင်ပြီးသောစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စာပိုဒ်များ (စကားလုံး သုံး၍) အကြားပုံရိပ်များရှိသည်။ အမှန်တရားမှာ၎င်းတို့အားသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေရန်နှင့်၎င်းတို့နေရာတွင်ဆက်လက်ထားရန်အလွန်အဆင်မပြေမှုများရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်ရန်၎င်းကိုတင်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာအုပ်မှရုပ်ပုံများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာစိုးရိမ်ပူပန်စေခဲ့သည်။ မင်းအဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ Kindle နဲ့ပဲစခဲ့တယ်။ ငါထားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကဘယ်နေရာမှာမှပေါ်မလာဘူး။ ငါရူးတော့မယ်!!!!!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်တတိယသုံးမျိုးဆက် Kindle ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Kindle azw4 format ဟာနောက်ပြန်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသိချင်ပါတယ်။
စတုတ္ထမျိုးဆက်ထုတ်ကုန်သည် azw format ကိုသာထောက်ပံ့သည်။ azw3 ပုံစံသည်၎င်းတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်က pc အမျိုးအစားကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်လိုက်တာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အဲဒါကိုအစပြုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာတွေထူးလဲ? ငါလုပ်နိုင်တာ ငါ့မှာ windows 10 ရှိပြီး ၃၄ bit နဲ့ 34 bit caliber ရှိတယ်။ epub ကိုဖတ်ရှုဖို့လည်း။